प्रचण्डसँग सल्लाह भयो, ढुक्क हुनुहोस अब कुनै हालतमा पार्टी फुटदैन: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा केही नेताहरु दक्षिणपन्थीको इशारामा पार्टी फुटाएर सरकार बनाउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन । शुक्रबार प्रवासी नेपाली एकतामञ्चको जुम भेलामा प्रधानमन्त्री ओली भने, ‘पार्टी
फुटेको होइन केही साथीहरु अलग हुनुभएको छ । आफै अलग्गिएर जानुभएको छ। निर्वाचन घोषणा भएपछि पार्टी फुटाउने ? पार्टी फुटाएर दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउन लाग्नुभएको छ । उहाँहरु समाजवाद उन्मुख बाटो भत्काउनेतर्फ लाग्नुभएको छ ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सडकमा जानु भएको छ । सत्तोसराप गरेर जनताको मन दुखाउनुभएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको हुर्मत लिने, अग्रगमनका बाटाहरु कमजोर पार्ने प्रयास बन्द गर्नुस्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड-माधव पक्ष
गणतन्त्र र लोकतन्त्रका विरुद्ध लागेको आरोप लगाउँदै आफै पार्टी फुट्यो भनेर हिँडेको पनि बताए । उनले आफ्नो पार्टी वैधानिकताका लागि निर्वाचन आयोग नगएको र नजाने समेत बताए । ‘हामी वैधानिकतको प्रमाणपत्रका लागि निर्वाचन
आयोग गएका छैनौं । हामी वैधानिक नै छौँ भने किन दरखास्त हाल्न जान्छौँ ?’ ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामी किन जान्छौँ ? अदालत, निर्वाचन आयोग ?’ उनले प्रचण्ड-माधव पक्ष लाइन लागेर अदालत, निर्वाचन आयोग र सडकमा गएको पनि बताए ।
सर्वसम्मतिले छानिएको दलको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नदिएर अर्को भेला गर्नु, पार्टी अध्यक्षलाई निकाल्यौं भनेर सडकमा घोषणा गर्नुजस्ता क्रियाकलाप आफूलाई स्वीकार्य नहुने ओलीले बताए । उनले यही कारण संविधानको कार्यान्वयनका
लागि ताजा जनमतमा जानुपर्ने अवस्था आएको र आफू संसद विघटन गर्न पुगेको बताए । ‘कसको जिम्मा जवानीमा उहाँहरू देशको हितविपरीत लाग्नुभयो उहाँहरूले नै जानुन्,’ ओलीले कटाक्ष गरे । उनले पार्टीले आह्वान गरेका बैठकमा नआएर
सडकबाट केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएँ भन्नु हास्यास्पद भएको बताए । ‘दुई बैठकमा आउनु भएन केही फरक पर्दैन । अबको बैठकमा आउनुस् फेरि छलफल गरौं । उहाँहरू किन सडकमा हामी यहाँ छौं भनेर जग हसाइरहनु भएको छ ।
हामीले त पार्टीबाट निकालेका छैनौं’, उनले भने । ओलीले पार्टी विभाजन हुन नदिने बताए । ‘पार्टी विभाजन भएको छैन । केही मान्छेका जंगली महत्वाकांक्षालाई मैले बचाइराख्न सकिन । र, उहाँहरू तर्किनु मात्रै भएको हो’, ओलीले भने ।